Indlela yokwazi ukuba bafunde umyalezo kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungazi njani ukuba bafundile umyalezo kwi-Instagram
NgoJanuwari 22, 2019 0 IiCententarios 1834
Unxibelelwano ngumsebenzi kunye nesidingo esingokwemvelo sobuntu. Ngokuqhubela phambili kwezonxibelelwano, abasebenzisi abaninzi baye baba ngabalandeli babo. Oku kubulela kumandla okwanelisa le mfuno ngu phakathi kwe-cyber I-Instagram lelinye lamaqonga avumele unxibelelwano kubantu abangaphezulu kwezigidi ezingama-600. Ngesi sizathu, yenye yezona zidumileyo kwihlabathi langoku. Enye ye kutsha nje Izixhobo zeqonga kufana nokwazi ukuba ufunde umyalezo kwi-Instagram.
I-Instagram yi inethiwekhi yoluntu eyaziwayo, evumele abasebenzisi ukuba banxibelelane ngemifanekiso. Oku kuyenzeka, kuba iposti yeqonga kufuneka iphethe ifoto, umfanekiso okanye ividiyo. Kwaye kwezi zinto zongezwa inkcazo yento eyenziwayo ngalo mzuzu. Ukongeza kwinethiwekhi yezoluntu, izise nayo iminyaka ethile ukhetho lokuthumela imiyalezo ngqo. Yenjenje khuthaza unxibelelwano phakathi kwabasebenzisi benethiwekhi. Fumana ukuthanda okuzenzekelayo kwi-Instagram.
Imiyalezo engqalileyo ye-Instagram ibe inguquko kwisicelo. Ezi bezisoloko zivela kwindalo ngoku phucula amava yomsebenzisi. I I-Instagram Direct Bayamvumela umntu ngamnye ukuba abelane ngezimvo kunye nemiyalezo ebhaliweyo nabanye abasebenzisi. Ngale ndlela unokongeza iifoto kunye nevidiyo eziqhotyoshelwe kumyalezo. Kutshanje ukuthumela amabali Ngomyalezo othe ngqo.
Ukuthumela umyalezo ngokuthe ngqo, umsebenzisi kufuneka abeke ibhokisi yakhe yeposi kwaye ukhethe a umyalezo omtsha Emva koko, kuya kufuneka ukhethe umsebenzisi ofuna ukuthumela umyalezo kuye kwaye uqalise ukubhala kuye. Nje ukuba umyalezo uthunyelwe kwaye umsebenzisi awufundile, isicelo siza kubonisa i imeko yemiyalezo Oko kukuthi, ngale nto umsebenzisi kufuneka azi ukuba bafundile umyalezo kwi-Instagram.
Ungazi njani ukuba bafundile umyalezo kwi-Instagram?
Kukho abasebenzisi abaninzi be-Instagram abafuna ukwazi xa umyalezo uthunyelwe ibonakalisiwe ngumamkeli. Usetyenziso lwe Instagram, izise isaziso sokufunda. Ungazi njani ukuba bafundile umyalezo kwi-Instagram, unokwenziwa ngendlela elula kakhulu. Ukwenza oku, kufuneka ube ungumsebenzisi landela unayo uthotho lwamanyathelo Ayinkimbinkimbi kwaphela.
Kule nto, umsebenzisi kufuneka chonga eqongeni. Oku kunokwenziwa nge-imeyile yakho ehambelana ne-Instagram okanye igama lakho lomsebenzisi kwi-app. Kwakhona, kufuneka ufake iphasiwedi kwibhokisi oyifunayo. Nje ukuba ufake isicelo kufuneka aqhubeke ukwazi ukuba bafundile umyalezo kwi-Instagram.
Itreyi okanye ibhokisi yemeyile
Emva kokufaka isicelo, umsebenzisi makangene ibhokisi yemiyalezo. Kanye kuyo, unokujonga Yonke imiyalezo yenziwe okanye yamkelwa. Ukujonga ukuba umyalezo ubonakalisiwe, umsebenzisi angafikelela nakweyiphi na imiyalezo esele ikwitreyi.
Umsebenzisi kufuneka avule nayiphi na incoko Sele ikhona apho umyalezo wokugqibela uthunyelwe khona. Ezi zinokuba kuye nawuphina umntu kwaye zenziwe ngawo nawuphi na umhla. Ngendlela eya kuthi ukuba umsebenzisi akhethe umyalezo wencoko ethe ngqo kwiminyaka embalwa edlulileyo, uya kuba nakho ukwazi ukuba ngaba umamkeli Uwubonile umyalezo we-Instagram.
Xa sele uvula incoko oyifunayo, umsebenzisi kufuneka aqinisekise ukuba umyalezo wokugqibela sele ithunyelwe nguye. Ke, ngezantsi komyalezo, iphawu eliyilwe ngamehlo linokuthi okanye lingabikho. Oku kuyakwenzeka kuxhomekeka kwimeko yomyalezo. Kwiimeko apho umyalezo uboniswe khona, i icon ifunyenwe phantsi komyalezo. Ngokungafaniyo nomyalezo ongafundwanga, othi ayizubakho Iphawu elinombala wamehlo.
Ungakuphepha njani ukubonisa ukuba umyalezo ufundwe kwi-Instagram?
Ngokufanayo, njengabasebenzisi abaninzi bafuna ukwazi ukuba bafundile umyalezo kwi-Instagram. Kukho uninzi olungafuniyo ukushiya obu bungqina. Ngale ndlela, banako kuphepha Vumela umthumeli azi ukuba bafundile umyalezo kwi-Instagram.
Ukuze ukwazi fihla imeko Umboniso womboniso, into yokuqala efunekayo kukufumana umyalezo. Nokuba umamkeli, umsebenzisi unokufihla ukuba ufundile umyalezo. Oku kunokuba izizathu ezahlukeneyo, njengokuphepha uxinzelelo ukwenza impendulo ethile.
Phambi kokuba ubonise umyalezo, umsebenzisi kufuneka abeke ifowuni yakhe ngaphakathi Imowudi yenqwelomoya, okanye ukusilela ukukhubaza i-Wi-fi kunye nedatha yeselula. Oku kuya kuthintela usetyenziso ukuthumela ulwazi kwiqonga ngokubanzi.
Emva kokuba usike unxibelelwano kwiwebhu, umsebenzisi ingajonga umyalezo ofunyenwe ngaphandle kwengxaki. Kuba akuyi kubakho nokwenzeka ukuba umsebenzisi owuthumileyo angazi ukuba bafundile umyalezo kwi-Instagram.
Emva kokufunda umyalezo, umsebenzisi kufuneka awukhuphe. Emva koko, unokurhoxa kwisicelo kwaye yenza kwakhona ifowuni. Ukwenza oku, kuya kufuneka usebenze kwimowudi yenqwelomoya okanye uqhagamshele idatha yeselula okanye ye-Wi-Fi.
Unokubakho njani abalandeli abaninzi kwi-Instagram?
2 I-Instagram Direct
3 Ungazi njani ukuba bafundile umyalezo kwi-Instagram?
3.1 Ngena kwisicelo
3.2 Itreyi okanye ibhokisi yemeyile
4 Ungakuphepha njani ukubonisa ukuba umyalezo ufundwe kwi-Instagram?
4.2 Imowudi yenqwelomoya
4.4 Yenza kwakhona
NgoJanuwari 22, 2019
Uyiphinda njani ibali kwi-Instagram
NgoJanuwari 23, 2019
Ungathumela njani kwi-Instagram ukusuka ku-Facebook